Teeth Brighter | Way Best inay Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn
Posts tagged "ilkaha dhalaal"
Guriga Ku-saleysan Siyaabaha caddeeya aanu u caddayn Ilkaha
sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha
baking soda waxaa laga heli karaa jikada ee ku dhow kasta oo guriga iyo waxay ka caawisaa sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha. Dadka isticmaali baking soda sida tastemaker a. baking soda sidoo kale loo isticmaalaa ujeedooyin nadiifinta. Waa wax ku ool ah ka shaqeeyaa inay ka qaboojiyaha ka saar ur pungent. Waxaad isticmaali kartaa baking soda nadiifinta ilkaha. Dubista soda waa hadal haynta in dabeecadda iyo habkaani kaa caawinaysaa in aad si tartib ah ka dusha daahii dibadda ee ilkahaaga ka saari doonaa. Waayo caddeeyo ilig, qaado qaado ee soodhaha, Dhibic yar oo biyo ah iyo burush jilicsan qoyan-bristled. Qaado soda ku qoran oo timir ah iyo dar dhibcood oo biyo ah, waxa uu si ay u sameeyaan, Jinka ah waxaa ka mid ah. Hadda waa inuu dhex geliyaa caday galay Jinka iyo cadaydo ilkahaaga. Waxaad u soo raaci kartaa habkan sida ugu badan ee hal mar todobaad kasta.
Posted by Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn - June 4, 2016 at 7:25 AM
Categories: Home ku saleysan in Ilkaha caddeeya aanu u caddayn Tags: baking soda, sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha, ilkaha dhalaal, caddeeya aanu u caddayn ilkaha